ဂျုံမှုန့် ဆန်ကြိတ်ခွဲမှု စနစ်အတွက် Positive Conveying Rotary Airlock Valve မှတဆင့် စီးဆင်းမှုအား မှုတ်ထုတ်ပါ။
ဂျုံမှုန့်နှင့် စပါးအမှုန်အမွှားများကို သယ်ဆောင်ခြင်းအတွက် အနုတ်လက္ခဏာဖိအားပေးသည့် rotary airlock valve လေလော့ခ်
ROTARY VALVE WEAR စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဖြေရှင်းချက်
pneumatic သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များတွင် အကြီးမားဆုံးပြဿနာတစ်ခုမှာ rotary valves များတွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်းဖြစ်သည်။Rotary airlock valves များသည် pneumatic conveying system ၏ အရေးကြီးသော workhorses များဖြစ်နေဆဲဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် differential pressur အတွက် seal တစ်ခုဖန်တီးစဉ်တွင် ပစ္စည်းအား ထုတ်လွှတ်ရန်အတွက် အပြင်ဘက်တွင် အကောင်းဆုံးသော device များဖြစ်သောကြောင့် ...
dense phase conveying နှင့် dilute phase conveying အကြား ကွာခြားချက်ကား အဘယ်နည်း။အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များ ?
အထူးသဖြင့် fluid mechanics ၏ စည်းကမ်းချက်များ၌ dense phase conveying နှင့် dilute phase conveying အကြား ခြားနားချက်ကို နားလည်ရန်နှင့် pneumatic conveying systems များကို တိကျစွာ ဒီဇိုင်းနှင့် ချိန်ညှိနိုင်စေရန်။ချိန်ညှိခြင်းအမြန်နှုန်းနှင့် လေဖိအားသည် pneumatic သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တွင် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။acc...
pneumatic conveying ဆိုတာ ဘာလဲ။
pneumatic conveying ဆိုတာ ဘာလဲ။Pneumatic conveying သည် လေ သို့မဟုတ် အခြားဓာတ်ငွေ့များကို အသုံးပြု၍ ပိုက်တစ်ခုမှတဆင့် အမြောက်အများ သယ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်သည်။... Pneumatic သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည် အပြုသဘောဖိအား သို့မဟုတ် လေဟာနယ်စနစ်အဖြစ် တည်ဆောက်နိုင်သည်။အမှုန်အမွှားများကို သယ်ဆောင်ခြင်းသည် လေ၏စွမ်းအင်ကို အသုံးပြုသည်...
rotary airlock valve သည် pneumatic conveying system တွင် မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။
rotary airlock valve အတွင်းတွင်၊ ဝင်ပေါက်နှင့် ထွက်ပေါက်များကြားတွင် လေကို အလုံပိတ် (လော့ခ်ချထားသည်)။လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း rotary airlock valve ၏ vanes သို့မဟုတ် metal blades များ။သူတို့ကြားထဲမှာ အိတ်ကပ်တွေ ပေါ်လာတယ်။ကိုင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေက အိတ်ကပ်ထဲကို ဝင်လာတယ်...
နှစ် 20 ကျော် နီးပါး နှင့် .ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည်တွင်းဈေးကွက်နှင့်ပြည်ပဈေးကွက်နှစ်ခုလုံးရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်၎င်းတို့သည်စကားလုံး၏အကြီးဆုံးအမြန်ရွေ့လျားနေသောမုန့်ဖုတ်လုပ်ငန်းနှင့်ဘီစကွတ်ကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။စျေးကွက်တွင်ရောင်းချနေသောထုတ်ကုန် 15 ခုကျော်ဖြင့်ကုမ္ပဏီသည်သန်းပေါင်းများစွာသော cons များ၏နေ့စဉ်ဘဝ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
rotary valve ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် သင့်ထုတ်ကုန်၏ အစုလိုက်သိပ်သည်းမှုအပေါ်အခြေခံ၍ သင့်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းစဉ် သို့မဟုတ် pneumatic conveying system capacity နှင့် ကိုက်ညီသည့် valve ၏ feeding capacity နှင့် ကိုက်ညီသည့်ကိစ္စဖြစ်သည်။Rotary airlock valve ရွေးချယ်ရာတွင် ပစ္စည်းစမ်းသပ်ခြင်း၊ ကွန်ပျူတာ...
1.Airlock rotary valve ဆိုသည်မှာ Airlock rotary valves များကို အစိုင်အခဲများ ကိုင်တွယ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ အင်တာဖေ့စ်များတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး၊ ပုံမှန်အားဖြင့် ဧရိယာ2ခုကို မတူညီသော အခြေအနေများအောက်တွင် (အချိန်အများစုတွင် ဖိအား) ခွဲထားရန် လိုအပ်သောအခါတွင်၊Rotary valves များသည်လည်း အသုံးများသော...
20-04-05 တွင် admin မှ
2020 ခုနှစ် ဧပြီလ5ရက်နေ့တွင် COVID-19 ကာလအတွင်း Zili သည် ပုံမှန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုကို ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီး ဒုတိယမြို့တော်ဝန်သည် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်မှုပေးရန် လုပ်ငန်းထံသို့ လာရောက်ခဲ့သည်။လုပ်ငန်းသည် လက်ရှိကူးစက်ရောဂါအခြေအနေအရ ဌာနအသီးသီး၏ ထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေကိုလည်း အစီရင်ခံတင်ပြပါသည်။အဲ...
Zili သည် 2019 ခုနှစ် အကျဉ်းချုပ် အစည်းအဝေးကို ကျင်းပသည်။
admin မှ 20-01-22 ရက်နေ့တွင်
ဇန်နဝါရီလ 22 ရက်၊ 2020 တွင် Zili ၏ 2019 နှစ်ပတ်လည် အကျဉ်းချုပ် အစည်းအဝေးကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေးတွင် ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးမှ ယခုနှစ်လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းချုပ်တင်ပြကြပြီး 2020 ခုနှစ် နှစ်သစ်အတွက် လုပ်ငန်းစီမံချက်နှင့် ရည်မှန်းချက်များ ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ တွေ့ဆုံပွဲတွင် အထွေထွေမန်နေဂျာ Mr. He မှ အရေးကြီးသော အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Rotary Airlock Valve ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း။
admin မှ 20-01-13 ရက်နေ့တွင်
Rotary valves များသည် အလွန်ရိုးရှင်းသောစက်များကဲ့သို့ထင်ရနိုင်ပြီး ၎င်းတို့သည် pneumatic conveying စနစ်များမှတစ်ဆင့် အမှုန့်များစီးဆင်းမှုကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။စနစ်ကို လုံခြုံချောမွေ့စွာ လည်ပတ်နေစေရန်အတွက် Rotary valve များသည် ပရီမီယံအခြေအနေတွင်ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ပြဿနာတစ်ခုခုကြုံရမလား...
"အလုပ်သမား ကျွမ်းကျင်မှုပြိုင်ပွဲ၊ သင်ယူပြီး စွမ်းရည်များ တိုးတက်စေခြင်း။"2019 ခုနှစ်တွင် ကျွမ်းကျင်မှုပြိုင်ပွဲ။
admin မှ 19-08-05 ရက်နေ့တွင်
2019 ခုနှစ် ဩဂုတ်လ5ရက်နေ့တွင် Zili ၏ဥက္ကဌ Lianrong Luo သည် လုပ်ငန်း၏ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသို့သွားရောက်ခဲ့ပြီး ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကျွမ်းကျင်မှုပြိုင်ပွဲကျင်းပရန် ဝန်ထမ်းများအား စီစဉ်ပေးခဲ့ပါသည်။လှုပ်ရှားမှုအပြီးတွင် Mr. Luo ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဂုဏ်ထူးဆောင် လက်မှတ်များ ပေးအပ်...
“စည်းလုံးညီညွတ်ပြီး အလုပ်ကြိုးစားပါ၊ ရလဒ်ကောင်းများကို အတူတကွဖန်တီးပါ” — 2019 ခုနှစ်တွင် Zili ၏ အရောင်းအဖွဲ့၏ ပြင်ပဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများ။
admin မှ 19-07-30 ရက်နေ့တွင်
ဆက်သွယ်ရေးတိုးမြှင့်ရန်၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် အသင်းအဖွဲ့စိတ်ဓာတ်ကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် 2019 ခုနှစ် ဇွန်လ 30 ရက်နေ့တွင်၊ Sichuan Zili Machinery Co., Ltd. ၏ အရောင်းအဖွဲ့နှင့် R&D အဖွဲ့သည် ဝန်ထမ်းပေါင်းများစွာကို အတွေ့အကြုံ တိုးချဲ့ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်ကို လုပ်ဆောင်ရန် ဝန်ထမ်းများကို စည်းရုံးခဲ့သည်။ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် ကြိုးစားအားထုတ်မှုတို့ကို ဖန်တီးပါ...
3-Way Diverter Valve, Three-Way Ball Valve,3Way Ball Valve, rotary airlock valve, လော့ခ်, rotary valve,